Dhegayso Booliska Galmudug oo dhibaato u gaystey dhalinyaro Farabadan | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhegayso Booliska Galmudug oo dhibaato u gaystey dhalinyaro Farabadan
Dhegayso Booliska Galmudug oo dhibaato u gaystey dhalinyaro Farabadan
Warar inaga soo gaaraya magalada caabudwaaq ee maamulka galmud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo gumaad loo geysanayo shacab aan waxba galabsan oo dhamaantood kasoo jeeda deegaanada maayland.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in dhalinyaro badan ay hada ka buuxaan xabsiyada maamulka galmudug kuwaasi oo halkaasi loogu geysanayo jir dil aad badan iyo weliba handadaad aan dhamaad laheyn.
Mid ka tirsan dhalinyarada halkaasi ku nool oo lasoo xiriirey warbaahinta smc ayaa inoo xaqiiyey in degmada caabudwaaq ay ka socoto barakicin la barakicinaayo dadka kasoo jeeda deeganada maayland qaarkoodnaay sibareer ah u tooganayaan ciidamada maamulka galmudug.
ficiladan foosha xun ay ku dhaqmayaan ciidamada amniga maamulka galmudug ayaa waxaa hor boodaya nin sarkaal ah oo ka tirsan ciidanka boliiiska degmada caabudwaaq oo lagu magacaabo Cabdi dheere.
Falkani ay ku kacayaan ciidamada degmada caabudwaaq ayaa waxaa uu salka ku hayaan qaraxii dhawaan ka dhacay deegaanada maamulka galmudug oo ay ku dhinteen dadyow aad u fara badan oo aan waxba galabsan.
Balse suaasha u baahan in la isweydiiya ayaa ah waa maxay sababta marka ay wax ka dhacaan gobolada galmudug iyo puntland mar walba loo bartimaameysto dadka kasoo jeeda deeganada maamyland iyaga oo og in dhamaan hogaamiyeyaasha falalkan geysanaya inay kasoo jeedaan deegaanadooda.
Si kastaba arinta ha ahaatee shacabka maayland ayaa noqdey shacab meel walba lagu ugaarsado isla markaana aan laheyn dad u hadla, ma aha markii ugu horeysay oo shacabkani lagu gumaado deegaanada maamulka galmudud iyada oo ay jiraan dad badan oo kasoo jeeda gobolkada galmudug oo si nabad ah ugu nool deegaanada maayland.
Previous articleGuddiga lagu mursansan yahay ee doorashooyinka oo soo saaray jadwalka doorashada
Next articleBooliska Soomaaliya oo sheegay inay ku raadjoogan Burcad weerar ka geystay Muqdisho